Soo dejisan K7 16.0.0.263 AntiVirus Premium... – Vessoft
Qaybaha: Difaac guud, Antiviruses
Bogga rasmiga ah: K7
K7 – antivirus leh fir fircooni sare si aad uga ilaaliso kambiyuutarka kahortaga hanjabaadaha internetka iyo dayacmooyinka kala duwan. Kumbuyuutarku wuxuu ogaan karaa fayrusyada noocyada kala duwan, wuxuu helaa nacaybka iyo hindhistaha, ka hortagaya hanjabaadaha aan la garaneynin, ogaan iyo xayiraan nacaybka ku salaysan habdhaqanka, iwm. K7 waxay bixisaa ammaanka internetka inta lagu jiro internetka adigoo eegaya bogagga internetka iyo xannibista qashinka. Software wuxuu ilaaliyaa dekadaha USB-ga ee ka hortagaya qalabyada qalabka loo yaqaan "externe connected" si loo soo dajiyo fayraska autorun ee kombiyuutarka. Sidoo kale K7 waxaa ku jira qaababka habka dhismaha ee horumarka ah ee dhismaha ku jira.
Anti-rootkit iyo anti-spyware
Sawirrada xooggan ee nugul
Kormeerka dabeecadaha barnaamijyada
Soo dejisan K7
Faallo ku saabsan K7
K7 Xirfadaha la xiriira